Respond To “ပျူ”ကုတ်
This post really gets on my nerves. So I tried to writeacomment but it seems my comment was too long to submit. (Actually my comment was most likely purposely unapproved.) So I blogged it.
ကိုလင်းဦး ယူနီကုတ်နဲ့ ဘလော့ ရေးတာနော်
linoo2007: ဟုတ်တယ် ဧရာယူနီကုတ်
me: အဲဒါ မြန်မာ3နဲ့ ဘာကွာလဲ အတူတူပဲလား
linoo2007: တူဘူး မြန်မာ ၃ မှာက
linoo2007: ကေ (ကေ)
##ဧရာက ယူနီကုတ် အက္ခရာတွေကို သုံးထားတာ ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ယူနီကုတ် စာလုံးစီပုံကို မလိုက်နာထားပါ။ ဒါကြောင့် ဧရာဟာ ယူနီကုတ် မဟုတ်ပါ။
linoo2007: လက်ရှိ အစိုးရကသာ စံမီတယ်ဆိုပြီး
##ယူနီကုဒ်က အစိုးရနဲ့ ဘာမှမဆိုင်ပါ။ ISO နဲ့ Unicode Consortium ကိုယ်တိုင်ကိုက ဘယ်အစိုးရကမှ ချုပ်ကိုင်ထားခြင်းမရှိတဲ့ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိ ယူနီကုဒ်အတွက် ဝိုင်းဝန်းလုပ်ပေးနေသူတွေဟာလည်း ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားပြီး တစ်ပြားမှမရဘဲ မြန်မာစာတိုးတက်ရေးအတွက် ရှေးရှုပြီး အားလုံး ဝိုင်းဝန်း ကူညီပေးနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရှိနေ မြင်နေ ရတာပဲ။ ဥပမာ။ (ကေ) ရိုက်မယ်ဆိုပါစို့ ၊ (က) ပြီးမှ (ေ)
ရေးမယ် ဆိုပါစို့။ ရ +ေ+ ၀ +ှ+ ည + ၀+ ှ+ န+့+်လို့ ရိုက်
##ယူနီကုဒ်မှာ ဘယ်ဘာသာစကားအတွက်မဆို လိုက်နာရမယ့် စည်းမျဉ်းတွေ ရှိပါတယ်။ ဗျည်းအရင်လာ၊ ဗျည်းနောက်က ဗျည်းတွဲ၊ ဗျည်းတွဲပြီးမှ သရလာ စတဲ့ မလွဲမသွေ လိုက်နာရတဲ့ စည်းမျဉ်းတွေပါ။ ဘာသာဗေဒ နဲ့ ယုတ္တိဗေဒ သဘောတရားအရ စီစဉ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ရိုက်တဲ့အခါမှာသာ သင်ပုန်းကြီးအတိုင်း ရိုက်လို့ရအောင် စီစဉ်ပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
##စာမျက်နှာ ၃၀၀ မပြောပါနဲ့။ စာမျက်နှာပေါင်း သုံးသောင်းခွဲအထက်ရှိတဲ့ ပရောဂျက်တွေကို ကျွန်တော် ယူနီကုဒ်နဲ့ လုပ်နေတာပါ။ နောက်တစ်ခု မန်မိုရီများစွာကုန်တယ်ဆိုလည်း မဟုတ်ပါ။ စာလုံးရေ အတူတူရှိတဲ့ Shaping Engine သုံးထားတဲ့ Text နဲ့ မသုံးထားတဲ့ Text နဲ့ကို ပြိုင်တူဖွင့်ကြည့်ပြီး ယှဉ်ကြည့်ပါ။ နောက်တစ်ခု မန်မိုရီများလာနဲ့ စီပီယူပူလာတာနဲ့ (ဘာဆိုဘာမှ) မဆိုင်ပါ။ သံလွင်ဖောင့်ဟာ Adode ရဲ့ နောက်ဆုံးထွက် ဗားရှင်းအကုန်မှာ သုံးလို့ရပါတယ်။
အပြန်အလှန် ပြောင်းလို့ရပါသလား။ ဖတ်လို့ ရပါသလား။ (Converter
ဆိုလိုသည်) ။ ပြောင်း၍ မရပါ။ ကြိုစားမှုကို လေးစားပါတယ်။ သို့သော်
##ရပါတယ်။ မြန်မာ၂ နဲ့ မြန်မာသုံး ကွာတာဟာ – မြန်မာ၃ မှာ စာလုံးစီပုံမှားရင် ချက်ချင်းမြင်ရအောင် Dotted Circle နဲ့ ပြပြီး မြန်မာ၂ မှာ မပြပါ။
၁၃။ Alt+1 – တစ်ခုနှင့် တစ်ခု ဝေးခြင်း
၁၄။ ခေါင်းလောင်းလေး – ဝါနေလား၊ မဝါဘူးလားကို လှမ်းကြည့်ကြည့်
##အဲဒါ NHM ကီးဘုတ် တစ်ခုကို ကြည့်ပြီးပြောနေတာသာ ဖြစ်ပါတယ်။ Control+Shift နဲ့မှ ရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင် မြန်မာ၃ လက်ကွက်နဲ့ ရိုက်လို့ရတဲ့ အက္ခရာ ကီးဘုတ် ရှိပါတယ်။
၁၅။ Font Style – အလွန်များပြားနေပြီး တစ်ခုချင်းစီကို install လိုက်
##လိုမှ လုပ်ပါ။ မလိုလည်း တစ်ခုတည်း ရှိလည်း အားလုံးကို အမှန် မြင်ရပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာမှာလည်း အင်္ဂလိပ်ယူနီကုတ်တွေ ဖြစ်တဲ့ Arial, Time News Roman, Verdana, Tahoma စတဲ့ ဖောင့်အစုံ သုံးနေတာပဲ မဟုတ်ပါလား။
၁၆။ Fonts – တစ်နေရာတည်းတွင် စုစည်း၍ ရှိမနေခြင်း
##MyanmarLanguage.org မှာ ရသမျှ အချက်အလက်တွေအကုန် စုစည်းဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်။ ယူနီကုတ်ဖောင့်တွေပါတဲ့ Package တစ်ခုလည်း စုစည်းပေးထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
၁၇။ စာရိုက်ဟန် – ဗျည်းကိစ္စ၊ သရကိစ္စကို ထည့်ပြောနေရခြင်း
##atn လို့ ရိုက်ပြီး ant လို့ ထွက်ချင်ရင် ဒါတော်တော်လွဲနေပြီလို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့ လုံးကြီးတင်ပြီးမှ ေချောင်းငင်လာမလား၊ ချောင်းငင်ပြီးမှ လုံးကြီးတင် လာမလား၊ ဆုံးဖြတ်ပါ။
၁၈။ Softing – ရသည်ပြောသော်လည်း တကယ်စမ်းမပြနိုင်ခြင်း
##Sorting ကို Open Office မှာ (အခု) အလွယ်တကူ စမ်းနိုင်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်း ဘယ် OS Vendor မဆို မြန်မာစာ အတွက် အထောက်အပံ့ပေးတဲ့အခါ ယူနီကုဒ်စံကိုသာ လိုက်နာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၉။ တီထွင်သူများ – user များ နားမလည်နိုင်သော စကားများကို တွင်တွင်ပြောခြင်း
##နားရှုပ်စရာတွေ ရှိပါတယ်။ ကွှန်တော်လည်း စသုံးခါစက သိပ်နားမလည်ပါဘူး။ နောက်ပိုင်းတော့ သူများကို ရှင်းပြဖို့ာကိုးစားရင်း တော်တော်များများ နားလည် လာပါပြီ။
၂၀။ အနေအထား – zawgyi လို ရော့သုံးလို့ရပြီလို့ မပြောရဲကြခြင်း
##မပြောရဲစရာ ဘာမှ မရှိပါ။ သုံးမယ်ဆို သုံးလို့ ရပါပြီ။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် သုံးလာတာ တစ်နှစ်ကျော်ပါပြီ။ ပြဿနာတွေ ရှိကောင်းရှိမယ်။ အပြစ်ထိုင်တင်နေမယ့်အစား ကွန်ပျူတာသုံး မြန်မာစာ တိုးတက်လာဖို့အတွက် ယူနီကုဒ်အတွက် မိမိကိုယ်ပိုင်အချိန်တွေထဲက ဖဲ့ပြီး အလုပ်လုပ်ပေးနေတဲ့ Developers တွေကို လေးစားသော အားဖြင့် မိမိကြုံတွေ့နေရတဲ့ အခက်အခဲတွေကို သူတို့ကို Feedback ပေးခြင်းနဲ့ ကူညီနိုင်ပါတယ်။
1) Unicode ppl are real vallains. We should execute them all.
2) NLP is the most profiting organization with Unicode. (And leading people in NLP are getting millions with Unicode and preventing democracy. Is it? whatever) We should execute them all too.
3) Zawgyi isastandard with it’s own. We will use it all life long.Long life Zawgyiiiiii!
4) Nobody knows who are Zawgyi developers coz they are very shy. (And probably secretive like Zorrow or Vendetta.. wow I got goosebumps…)
5) Gov is using Unicode by order coz nobody is using it. (Poor SPDC… I even wept for them.. sob .. sob..)
6) Unicode ppl don’t have စေတနာ​မှန် . You should learn and change yourselves.
7) Unicode developers has to adjust with Zawgyi. You, Unicode guys all should understand.You have to keep Zawgyi as center whatever you do.
8) Unicode isafont.
I inspired from this post. Hehe. 😀
Myanmar Unicode Fix Macro
I found several articles in Myanmar Wikipedia have some common typing mistakes such as စ+ျ for ဈ , ၀(Zero) for ဝ(Wa) , ်+့ for ့+် and double ်် etc. I fixed them using my bot, but the problems would still persist for offline Unicode users. So I tried to list them and make the macro automation script.
1) Please download this file (UnicodeFix.Bas) and open Microsoft Word.
Go to “Macro”-> “View Macro”, name something in the name box and press “Create”.
Visual Basic will open. Go to “File” -> “Import File” and choose the downloaded “UnicodeFix.bas” file. Close Visual Basic.
You will see that there isanew “Unicode_Typo_Error_Fixes” macro now. You can delete the old empty macro we created.
If we press “Run”, all the Unicode typing errors should be automatically fixed. Have fun using flawless texts. 🙂
Tags: automatic, Macro, Microsoft Word, Myanmar, Unicode
စံသတ္မွတ္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ ယူနီကုတ္ေဖာင့္ကို စသုံးခ်င္တယ္။ ဘယ္က စရမွန္း မသိသူမ်ားအတြက္ ဒီလမ္းညႊန္ကို ေရးပါတယ္။ ယူနီကုတ္စသြင္းဖို႕အတြက္ မိမိရဲ႕ Windows ဟာ Windows XP SP3, Windows Vista, Windows7ျဖစ္ရပါမယ္။
၁။ Myanmar NLP က ထုတ္တဲ့ အခမဲ့ လြတ္လပ္ေဖာင့္ျဖစ္တဲ့ ျမန္မာ၃ ေဖာင့္ကို (ဒီလင့္ကေန) ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲခ်ပါ။
၂။ mm3.ttf ဆိုတဲ့ ဖိုင္ေလးရပါမယ္။ Start Menu > Control Panel > Fonts ကို ဖြင့္ပါ။
၃။ mm3.ttf ဖိုင္ကို Fonts Folder ထဲကို ဆြဲထည့္ပါ။ သို႕မဟုတ္ Copy ကူးထည္႕ပါ။
၄။ အခုလို Fonts Folder ထဲမွာ Myanmar3 Regular ဆိုတဲ့ ဖိုင္ေရာက္ေနျပီဆိုရင္ ဖိုင္သြင္းျခင္း ေအာင္ျမင္ပါျပီ။
၅။ ဒီစာမ်က္ႏွာကို Reload လုပ္ပါ။ ဒီကဈပီး ယူနီကုတ္ နဲ႕ ဆက္ေရးသြားပါမယ္။
၆။ ဒီ စာကြောင်းကို ဖတ်လို့ရပြီဆိုရင် သင်ဟာ ယူနီကုတ်ဖောင့်ကို အောင်မြင်စွာ ဖတ်ရှုနေနိုင်ပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ဝဘ်စာမျက်နှာတော်တော်များများမှာ ဇော်ဂျီနဲ့ ရေးထားတဲ့ စာတွေဟာလည်း ဖတ်မရတော့တာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ဒီပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို့ Firefox Menu ထဲက Tools > Options > Content ထဲက Default Font ကို Zawgyi-One လုပ်ပေးပါ။
အခုအခါ သင်ဟာ ဇော်ဂျီရော ယူနီကုတ်ပါ ဖတ်ရှုနေနိုင်ပါပြီ။ အခုလို အချိန်ကုန်ခံပြီး စမ်းသပ်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
##ယူနီကုတ်ကို စရိုက်သုံးဖို့ရန် လက်ကွက်အတွက် ဒီကိုသွားပါ။
Tags: how-to, Myanmar, Unicode, Zawgyi